Wasiirka Maaliyadda oo furay kulan wadatashi qiimaynta nugaylka dalka ee New Deal | Salaan Media
Home Wararka Wasiirka Maaliyadda oo furay kulan wadatashi qiimaynta nugaylka dalka ee New Deal
Wasiirka Maaliyadda oo furay kulan wadatashi qiimaynta nugaylka dalka ee New Deal
Wasiirka Maaliyadda iyo Qorsheynta dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamuud Xasan Suleebaan oo uu weheliyo wasiir ku-xigeenka wasaarada Mudane Abuukar Sheekh Cabdi Ibrahim, ayaa maanta si rasmi ah Muqdisho uga furay shirka wadatashiga qiimeynta nugaylka ee barnaamijka hiigsashada cusub (New deal).
Shirkan wada tashiga ee ay ka soo qayb-galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa la isku weydaarsaday fikradaha ku saabsan qorshaha midaysan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya la tegeyso shirka bisha September ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgium, shirkaasi oo dawladda federaalka ee Soomaaliya loogu yaboohi doono deeqo dhaqaale.
“Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qaybgalo shirkan wadatashiga, oo ah kii kowaad ee noociisa ee dalka lagu qabto ee qorshaha Hiigsashada Cusub ama New Deal oo ah hannaan si toos ah dalalka burburay loo siiyo deeqo dhaqaale si ay ugu aadiyaan baahiyahooda oo ay iyagu garanayaan. Shirkan wadatashiga waxaa laga samaynayaa dalka oo dhan” sidaasi ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda.
Dhanka, ururada bulshda ee ka soo qeyb-galay wada tashiga ayaa tilmaamay halka ay ku habboonaan lahayd macaawino la siiyo Soomaaliya si ay uga soo kabato bur-burkii wadanka ka dhacay.
“Kobcinta wacyiga dadka iyo waxbaradhada ubadka ayaa ugu mudan maal-galinta caalamka, waxaa xiga daryeelka caafimaad iyo in dadku helaan cadaalad u shaqaysa,” ayay tiri Maryam Takhal Xuseen oo ah masuul ka tirasan hay’ada Somali Women Development Center. Waxayna hoosta ka xariiqday inaysan caawimaada caalamku waxba soo kordhin karin haddii aysan ummadda Soomaaliyeed dib isu xisaabin una diyaar garoobin inay cawimadaas ka faa’iidaystaan.
Barnaamijka hiigsashada cusub waxaa lagu meelmariyey shirkii dhamaadkii sannadkii 2011kii lagu qabtay magaalada Busan ee dalka Koonfur Kuuriya. Waxana ujeedadu ahayd in wax laga bedelo hannaankii hore ee loo kaalmayn jiray dalalka nugul ee burburka ka soo baxaya, iyadoo markan si toos ah loo siinayo dhaqaale ay ku maareeyaan dhinacyada mudnaanta u kala leh ee ay ku soo kabanayaan.
Dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dhowaan saxiixday barnaamijkan ayaa diyaarinaysa qorshaha midaysan oo lala hortegayo shirka bisha soo socota ee September ka dhici doona magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Shirarka wadatashiga ee maanta laga furay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale lagu qabanayaa magaalooyinka Baydhabo, Garowe iyo Hargeysa si bulshadu Soomaaliyeed ay fikradahooda ugu biiriyaan qorshayaasha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya.